Automotive - Magcribible mampino
TOP 9 antony lehibe mahatonga ny fiara madinidinika tsara handeha amin'ny dia lavitra!
Hevitra tsara tokony hamelana ny olanao sy ny adidinao isan'andro mandritra ny herinandro ary handeha hitsangatsangana! Tsy momba ny toerana mety hitsidihana azy io! Fa ny fiara mety no tena izy. Betsaka ny toerana eto amin'izao tontolo izao izay tsy mila fiara…
Ny fironana mitombo sy ny lazan'ny fiara amin'ny antsipiriany
Ny fiara dia manome ny endrika tsara indrindra amin'ny dia amin'ny toerana iray. Araka ny fomba nentim-paharazana, ny fiara dia vy sy vy lehibe izay nila loharanon-karena be dia be hihazakazaka. Fa ny fandrosoana haingana amin'ny indostrian'ny fiara dia…
Ataovy azo antoka ny entanao ary voalamina amin'ny Clips Fastening Plastika
Aprily 12, 2017
Raha karazan'olona manao laharam-pahamehana amin'ny fandaminana sy ny filaminana ianao, na dia zavatra tsotra toy ny taratasy malalaka aza dia mety hidina ao ambanin'ny hoditrao. Ao an-trano na any amin'ny birao dia te hanana rakitra, antontan-taratasy, tapakila, faktiora ary zavatra hafa milamina sy…
Fantaro ny fomba ahafahanao manana endrika namboarina namboarina!
Tsy ny filalaovana metaly sy ny fanaovana metaly no lalaovin'ny zaza fa takatra fa indostrialy mahery vaika izy io ary ny endrika tariby dia ampiasaina amin'ny indostria maro toy ny aerospace, fananganana, elektronika izay anaovana forme ho clamp, clip ary retainer. Tena ilaina amin'ny…